”Al-Shabaab waxay doonayaan in ay noqdaan awood siyaasadeed, balse ay ku marmarsiiyoodaan in ay diin u …” | HalQaran.com
”Al-Shabaab waxay doonayaan in ay noqdaan awood siyaasadeed, balse ay ku marmarsiiyoodaan in ay diin u …”
ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira
Muqdisho (Halqaran.com) – Wareysi uu bixiyay ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira ayuu kaga hadlay arrimo badan oo khuseeyo arrimaha howlgalka AMISOM iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab.
Wareysigan oo uu Madeira siiyay wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayuu ku sheegay in Al-Shabaab ay doonayaan in ay noqdaan awood siyaasadeed, balse ay ku marmarsiiyoodaan in ay diin u dagaalamayaan.
”Argagaxisadu wax ay ku jiraan dagaal siyaasadeed iyaga oo adeegsanaya diinta Islaamka oo ah diin nabadeed oo wanaagsan”, ayuu yiri Madeira.
Ergayga ayaa wareysigiisa si gaar ah ugu ammaanay dadaalka ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta AMISOMay ka wadaan Soomaaliya.
Madeira ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay dadaal weyn ka geysteen sidii la isugu furi lahaa jidadka xiriiriya magaalooyinka qaar ee ku yaalla Jubbooyinka sida jidka isku xira Dhoobley iyo Afmadoow.
Al-Shabaab waxay doonayaan in ay noqdaan